(World) 14 Juunyo 2019. Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa maanta shaaciyey qiimeynta billaha ah ee kala sarreynta xulalka Adduunka, waxaana kaalinta koowaad ka soo muuqday xulka qaranka Belgium.
Xulka qaranka England ay hal tallaabo sare u soo kacay waxaana uu soo galay kaalinta afaraad, Portugal ayaa ku jira kaalinta shanaad, halka xulkii gaartay afar dhammaadka Koobkii Adduunka 2018 ee Croatia ay hoos ugu dhaceen kaalinta lixaad.
Spain ayaa ku jira kaalinta 7-aad, halka Uruguay ayaa soo tiigsaday kaalinta sideedaad, halka xulka qaranka Switzerland uu ka soo muuqday kaalinta sagaalaad.
Xulka qaranka Denmark ayaa dhammaystiray 10-ka sare ee kala sarreynta qiimeynta billaha ee xulalka adduunka ee FIFA.
Dhanka kale xulkeenna Soomaaliya ayaa soo galay kaalinta 202-aad kaddib markii uu muddo badan ku jiray kaalinta 203-aad iyo 204-aad, iyadoo ay sidoo kale kaalintaa la wadaagno xulka Eritrea.
Xulka Jabuuti ayaa sare u kac sameeyey waxaana uu ka soo muuqday kaalinta 195-aad, xulka Kenya uu joogo kaalinta 105, Ethiopia ayaana ku jira 150-aad.